Izindaba - Intengo Yensimbi Engagudluki Qhubeka Ukhule.
358 Uthango lokuntshontsha
Intengo Yensimbi Engavuthiwe Qhubeka Ukhula.
Kusukela kuqale lo nyaka, izinto zokusetshenziswa ezifana nokhuni, isiponji, izinto zokumboza ngamakhemikhali, izinsimbi ezingenayo i-ayoni, ngisho namabhokisi ayenyuka, futhi amanani ezigaba ezithile aze aphindeka kabili. Isibonelo, izinsimbi ezingezona ezensimbi zikhuphuke cishe ngama-50%, futhi i-poly-ether ethambile yegwebu, into ebalulekile eluhlaza yoqweqwe lwesiponji, inyuke ngo-126.74% ezinyangeni ezine ezedlule.
KuFocus, intengo yensimbi eluhlaza ibilokhu iqhubeka kusukela ngoJan, 2021. Kulezi zinsuku, ngemuva koMkhosi Wentwasahlobo, kusesimweni sokukhula.
Izici eziyinhloko zifana nezifutho:
● Ukukhishwa kwensimbi ngo-2020 kungaphansi kokukhiphayo ngo-2019
● UMnyango Wezemvelo Nezemvelo: Ukukhuthaza ngenkuthalo i-iron nensimbi, amalahle nezinye izimboni ukuxazulula umthamo owengeziwe
● Imakethe yezimfuno zomkhakha wemishini izoqhubeka nokusimama, futhi indawo yokusebenza kulindeleke ukuthi iqhubeke nokuba ngcono.
Ukuhlaziywa kukholwa ukuthi ukukhuphuka kwamanani entengo eluhlaza ngakolunye uhlangothi kuthinteke umqedazwe omusha womqhele womoya we-pneumonia, kanti ngakolunye uhlangothi kulindelwe ukucutshungulwa kokuvuselelwa komnotho womhlaba ngemuva kokuthi umuthi wokugomela umqhele omusha wethulwe ngokuzayo. Ukuphendula ukukhuphuka kwamanani entengo eluhlaza, izinto zasendlini nezinye izinkampani zimemezele ukunyuka kwentengo.
Imakethe yensimbi ifake ukulungiswa okunezigaba. Sibikezela ukuthi ukubukeka kwemakethe kusazoba nomfutho ophezulu futhi kuzolungiswa kancane esikhathini esizayo esiseduze, kulindwe isidingo sangempela sokuqala.
Izimali zezimali zigcina izinto zokusetshenziswa nokuqagela kwempahla emakethe yesikhathi esizayo kuyizizathu zokwenyuka kwamanani entengo yamuva. Lo mkhuba uzoqhubeka okungenani iminyaka emibili, futhi ingcindezi yokwehliswa kwe-RMB izokhula. Umnotho womhlaba awukaze usimame esimweni sokuvilapha kwezomnotho wangempela.
Isikhathi seposi: Mar-03-2021
Zu ikhathalogi yomkhiqizo nehele
Yini okufanele ngiyenze ngemuva kokugcotshwa ngokuphelele ...
Umkhosi weLantern ojabulisayo!
Steel nehele, zu nehele, ashiselwe Iron F ...
I-Whatsapp / Wechat: 008615530184730
Ikheli: I-A1608 Chuangxin Building, 315 Changjiang Avenue, High-tech Zone, Shijiazhuang, esifundazweni saseHebei. I-China